Giriiga Oo Muwaadin Soomaaliyeed Ku Xukumay 146 Sano Oo Xadhig Ah + Sababta [ Gudaha Ka Akhriso ]
Sunday 16th May 2021 06:50:31 in Wararkii Maanta by Madaxa Wararka
Giriiga Oo Muwaadin Soomaaliyeed Ku Xukumay 146 Sano Oo Xadhig Ah
Axad, May, 16, 2021 (Karin News) - Muwaadin Soomaaliyeed oo magangalyo doon ah ayaa lagu xukumay 146 sano oo xarig ah sababo la xidhiidha dambi ku saabsan tahriibinta dadka, sida lagu sheegay xukun kasoo baxay maxkamad ku taal Giriiga.
Muwaadinkan Soomaaliyeed oo ah 27 jir, ayaa waxaa lagu soo oogay dacwad la xiriirta tahriibinta muhaajiriin ka yimid dalka Turkiga una socday Giriiga. Shabakadda golaha Yurub ee qaxootiga iyo maxaabiista (ECRE) ayaa qortay in ninkan oo magaciisa lagusoo koobay Mohamad, oo ah aabe da ’yar oo afar caruur ah leh uu ka soo qaxay Soomaaliya oo uu aaday dalka Turkiga.
Wuxuu ka mid ahaa 34 qof oo doon caag ah ka raacay Turkiga kuna sii jeeday Giriiga bishii Diseembar 2020. Sida laga soo xigtay ECRE, doonta ay la socdeen ayaa ku degtay meel u dhow jasiiradda Lesbos iyadoo laba qof oo rakaab ah oo saarnaa doonta ay ku dhinteen.
Kuwa kale waxaa soo qabtay ilaalada xeebaha Giriiga, oo uu kujiro Mohamad. Mohamad ayaa la sheegay inuu waday Doonta. Sababtaas awgeed, waxay mas'uuliyiinta Giriigga ku soo oogeen dacwad ku saabsan inuu sharci-darro ah ugu socdaalay dhulka Giriiga.
Waxaa sidoo kale lagu soo oogay inuu khatar geliyey nolosha dadka kale iyo inuu sababay dhimashada laba qof. Dadkii kale ee ka badbaaday doonta waxay u markhaati fureen in Mohamad uu isku dayayay inuu badbaadiyo noloshooda markii uu la wareegay hagida doonta.
Waa go'aankii labaad oo ka dhanka ah muhaajiriint lagu eedeeyay tahriibinta dadka ee Giriiga wax ka yar bil, sida ay sheegtay ECRE. 23-kii Abriil, qaxooti kale oo Suuriyaan ah ayaa lagu xukumay 52 sano oo xarig ah iyo ganaax dhan 242,000 oo euro, kadib markii lagusoo eedeeyay inuu si sharci darro ah ku galay dalkaas.